Ukulwa nokuxhalabisa iMathe
Ukuxhalabisa iMathe okanye ukwesaba izibalo ngokuqhelekileyo kuyaqhelekileyo. Uxhala lweMathe, njengokuba uxhala lokuhlola lufana nelokugqithisa. Kutheni umntu evezwa yikrele? Ukwesaba into ehamba phambili phambi kwesihlwele? Uloyiko lokulibala imigca? Ukwesaba ukugwetywa kakubi? Umoyiko wokungafi na? Uxhala lweMathethi luba neloyiko lolunye uhlobo. Uloyiko lokuba umntu akayi kukwazi ukwenza izibalo okanye ukwesaba ukuba kunzima okanye ukwesaba ukwehluleka okuqhelekileyo kubangelwa ukungabi nantembelo.
Okona kuninzi, ukukhathazeka ngamathala kukuba ukwesaba ukwenza izibalo ngokufanelekileyo, iingqondo zethu zibaleka kwaye sicinga ukuba siya kuphelelwa kwaye kwaye ngokuqinisekileyo, iingqondo zethu zikhungathekile kwaye zixhalabisa, zikhulu amathuba okubamba. Uxinzelelo olongezelelweyo lokuba nemida emininzi kwiimvavanyo zeemathematika kunye novavanyo lubangela ukuba amanqanaba okuxhala akhule kubafundi abaninzi.
Ukuxhalabisa Kwimiba Kuvelaphi?
Ukuxhalabisa ngamathambo ngokuqhelekileyo kubangelwa ngamava angathandeki kwimathematika. Izifo zeephsikhi eziqhelekileyo zinezibalo eziboniswe ngolu hlobo kwaye zenza ukuba kuqondwe ukuqonda. Ngelishwa, ukuxhalabisa ngamathamsenti kubangelwa ukufumana amava okufundisa kunye namahlwempu kwiimathematika ezikhokelela ekukhathazeni izibalo. Uninzi lwabafundi endijamelene nazo nezixhala zamatriki kubonise ukuxhomekeka ngakumbi kwiinkqubo kwizibalo ngokuchasene nokuqonda imathematika. Xa umntu ezama ukukhumbuza iinkqubo, imigaqo kunye nemizila ngaphandle kokuqonda okukhulu, izibalo zikhawuleza zikhohliwe kwaye ukwethuka kungekudala.
Cinga ngamava akho ngesigqibo esisodwa - ukwahlula kwamaqhezu . Mhlawumbi ufundile malunga nokulungelelanisa kunye neengcambu. Ngamanye amazwi, 'Akusikho eyakho isizathu sokuba, vele uguqule kwaye wande'. Ewe, uyayikhumbula ngekhanda umthetho kwaye isebenza. Kutheni ku sebenza? Ngaba uyayiqonda ukuba kutheni isebenza?
Ngaba kukho nawuphi na umsebenzisi we-pizzas okanye i-math manipulative ukukubonisa ukuba kutheni isebenza? Ukuba akunjalo, umane ukhange ngekhanda inkqubo kwaye oko kwakunjalo. Cinga ngezibalo njengesikhumbuzo zonke iinkqubo - kuthini ukuba ukhohlwa ezimbalwa? Ngoko ke, ngale ndlela yeqhinga, inkumbulo enhle iya kunceda, kodwa, kuthekani ukuba awunayo inkumbulo enhle. Ukuqonda izibalo kubalulekile. Xa abafundi bebona ukuba banokwenza izibalo, yonke ingcamango yokuxhalabisa izibalo inganqotshwa. Ootitshala nabazali banendima ebalulekileyo ukuqinisekisa ukuba abafundi baqonda izibalo ezinikezelwa kubo.
Iingoma kunye neengcamango ezingalunganga
Akukho nanye kwezi zinto zilandelayo!
Uzalelwe ngejethi yamatriki, nokuba uyifumana okanye awunayo.
IMathematika yindoda, amabhinqa akafumaneki izibalo!
Ayikho ithemba, kwaye kunzima kakhulu kubantu abaphakathi.
Ukuba isalathiso sengqondo yakho asinamandla akho, awusoze wenza kakuhle kwizibalo.
IMatriki yinto enkcubeko, isiko sam sinalo!
Kukho enye indlela efanelekileyo yokwenza izibalo.
Isimo sengqondo esihle siya kunceda. Nangona kunjalo, izimo zengqondo ezintle ziza nokufundisa okusemgangathweni ukuze kuqondwe ngokuqhelekileyo akunjalo ngeendlela ezininzi zemveli zokufundisa imathematika.
Buza imibuzo, qinisekisa 'ukuqonda izibalo'. Musa ukulungelelanisa nantoni na ngaphantsi komyalelo. Cela imifanekiso ecacileyo kunye nemiboniso okanye imimiselo.
Hlalani rhoqo, ngakumbi xa unenkathazo. Thatha amanqaku afanelekileyo okanye sebenzisa amajelo ngokufanelekileyo .
Xa ukuqonda ngokupheleleyo kukuphephe, uqeshe umqeqeshi okanye usebenze nabaontanga abaqonda izibalo. Unokwenza izibalo, ngamanye amaxesha kuthatha indlela eyahlukileyo ukuba uqonde ezinye zeengcamango.
Musa ukufunda kuphela amanqaku akho - yenza izibalo. Zenza izibalo kwaye uqinisekise ukuba unokuthetha ngokunyanisekileyo ukuba uyayiqonda into oyenzayo.
Qhubeka kwaye ungagxininisi into yokuba sonke senza iimpazamo. Khumbula, ezinye zezifundo ezinamandla kunokuba zenze iphutha. Funda kwi mpazamo.
Fumana okunye malunga neengcamango zokwenza izibalo kwaye nawe uya kunqoba ukukhathazeka kwezibalo. Kwaye, ukuba ucinga ukwenza iimpazamo yinto embi, khangela kwakhona. Ngamanye amaxesha ukufunda okunamandla kunazo zonke kubangelwa ukwenza iimpazamo.
Fumana indlela ongayifunda ngayo kwimpazamo yakho.
Ungaphinda ufune ukufumanisa ukuba zeziphi iimpazamo eziqhelekileyo ezi - 3 kwizibalo kwaye ziphonononga izixhobo zokuzinqoba.
Fumana uPaint Acrylic Eyona Mveliso Yokusebenzisa Ngaphandle Kwemozulu Eshisayo
Iintlobo zeeNtlobo zeTuna
Ngaba Abemi baseMerika Bhiyozela Ukubonga kwaye Ngaba Ngaba Ngaba Ufanele?
INyanga kaFebruwari yafumana njani igama layo?
Indlela Omncinci Omncinane Omntwana Krisimesi uCarol Akaba Ngayo
I-Suggestopedia - Isicwangciso seSifundo
Umbala Wemibala - Imibala Yemibala Yomlingo
Iingelosi zithandaza: Ukuthandaza kuNkulumkankulu oyiRaguel